नेपाली काँग्रेसको सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित | Ekhabar Nepal
काठमाडौं, मङ्सिर २९ गते ।
नेपाली काँग्रेसको सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ । मङ्सिर २४ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापति पदमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको देउवा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
सभाापति पदका लागि दोस्रो चरणममा भएको मतदानमा देउवाले २७ सय ३३ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । त्यस्तै उहाँको प्रतिस्पर्धी डा। शेखर कोइरालाले१८ सय ५५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यसैगरी ३३ मत बदर भएको छ । यद्यपी, औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदानमा गएको हो । दोस्रो चरणको मतदानमा चार हजार ५६३ मत खसेको थियो । सभापतिका लागि तीन वटा मतपेटीकामा मत खसालिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ ।
डडेल्धुरा जिल्लाको ग्यान्यापधुरा गाउँपालिकास्थित असिग्राम गाउँको रुवाखोलामा बुवा प्रसादसिंह देउवा र आमा दुर्गादेवीबाट वि.सं. २००३ जेठ ३१ मा जन्मनुभएका देउवा नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा दोस्रो पटक विजयी हुनका लागि लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुपरेको छ । विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति सुरु गर्नुभएका देउवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गरी करिब १० वर्ष राजनीतिक बन्दी जीवन बिताउनुभएको छ । देउवाको जीवनयात्रा कठिन र सङ्घर्षमय छ । उहाँले २०२२ बाट सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्घबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य र सभापति बन्न सफल देयबा विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाउनुभएको थियो भने देउवालाई बीपीले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ भारतको बाटोबाट दार्चुला, बैतडी हुँदै डडेल्धुरा पुग्नुहुन्थ्यो ।
देउवाले राजनीतिक गुरु मान्नुुभएका कोइरालासँगको द्वन्द्वका कारण नेपाली काँग्रेस(प्रजातान्त्रिक)को सभापति भएका कारण काँग्रेसको ११औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा रहनुुभएन । २०६२.६३ को आन्दोलनपछि दुवै पार्टी एक भएपछि १२औँ महाधिवेशनमा देउवा पुनः सभापतिको उम्मेदवार हुनुुभयो । सो महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग उहाँको प्रतिस्पर्धा भयो । कोइरालाले एक हजार ६५२ र देउवाले एक हजार ३१७ मत प्राप्त गरेर उपविजेतामा चित्त बुुझाउनुुप¥यो । दुुई नेताबीच ३३५ मतको अन्तर थियो ।
काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा होमिनुभएका सभापति देउवालाई ७५ वर्षको उमेरमा पाँचौँ पटक देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सुअवसरसँगै पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवसर प्राप्त भएको छ । यसअघि वि।सं। २०७४ मा उहाँकै कार्यकारी नेतृत्वमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो दल बनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको नेकपा ९एमाले०मा आएको विवादका कारण देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देशको सेवा गर्ने सुअवसर मिल्यो ।
पञ्चायत कालको कठोर समयमै विद्यार्थीको नेता हुन सफल देउवा २०४८ यता निरन्तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । वि।सं। २०४८, २०५१ र २०५६ का संसदीय निर्वाचनमा डडेल्धुरा जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभयो । त्यसैगरी २०६४ र २०७० मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा डडेल्धुराका साथै कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाबाट समेत विजयी हुनुभयो । वि।सं। २०७४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा डडेल्धुराबाटै विजयी हुनुभएको थियो ।
एमालेले ५७ दिनसम्मको संसद् घेराउ गरेपछि काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ असारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि काँग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो र उहाँ पुनः काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभयो । संसद्मा पार्टीको बहुमत भएकाले उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पछि तत्कालीन राजाबाट उहाँ सत्ताच्युत हुनुप(यो ।
राजनीतिक घटना सँगसँगै वि।सं। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘शाही कु’मार्फत देउवालाई दोस्रो पटक हटाइदिएर सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा पाँच दशकपछि वि.सं. २०७२ को १३औँ महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराएर देउवा नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापतिमा विजयी हुनुभयो ।
वि।सं। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देउवा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस पार्टीको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकामा रहनुुभयो । २०४८ सालमा डडेल्धुराबाट सांसद बन्नुभएका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुनुुभएको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उहाँ संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुुभयो ।
वि।सं। २०५२ मा नेकपा ९एमाले० नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उहाँ पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुुभयो । २०५२ सालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला डा। बाबुराम भट्टराईलगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । पछि माओवादीसँग वार्ताका लागि सरकारको तर्फबाट पत्र लेख्ने व्यक्ति पनि देउवा नै हुनुहुुन्छ । १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय स्मरण गराउनुुभएको थियो ।